Haweenka Soomaaliyeed ee khatarta u bareeray si ay caasimaddooda u nabadeeyaan - BBC News Somali
Haweenka Soomaaliyeed ee khatarta u bareeray si ay caasimaddooda u nabadeeyaan
Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha aysan dumarku ka helin fursado badan siiba ciidanka balse sanadiihii ugu dambeeyey tirada haweenka ku biiraya ciidanka ayaa sii badanaysay.
Dugsiga booliiska ee General Kahiye ayaa ah halka ay haweenka cusub ee la shaqaaleysiiyay ay ku qaadanayaan tababarro.
10% ka mid xoogga booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay inay yihiin dumar.
''Ammaanka dumar haddii aysan sugin maba sugmaayo. Maxaa yeelay gurgii anagaa joogno, goobta shaqada waan joognaa. Laamiga annagaa taagan oo suuqiina ka adeegno. Waxaan aaminsanahay in dumarka aan looga roonayn marka ay timaado sugidda amniga'', ayay tiri Suweys Cabdullahi oo ah sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya.
La dhaqanka bulshada
Sida ay qabaan saraakiisha dumarka ee ka tirsan booliska, tirada badan ee haweenka ku biiraya booliska ayaa wax ka badashay sida ay boolisku ula dhaqmaan bulshada. Waxaana la xusayaa in haatan dumar badan ay ku faraxsan yihiin in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka xadgudubka ah ee loo gaysto.
Saraakiisha haweenka ayaa la geeyay xarun walba oo booliis waxayna la shaqeeyaan dhiggooda ragga ah.
Haweenka cusub ee saraakiisha ah ayaa rajeynaya inay la loollamaan dhaqanka ragga u janjeera ee sanado badan saameynta weyn ku lahaa bulshada Soomaaliyeed iyagoo doonayo inay muujiyaan in iyagaba sidoo kale ay si firfircoon uga qayb-qaadan karaan joogteynta sharciga iyo kala dambeynta.
Image caption Suweys Cabdullahai waa sarkaal ka tirsan booliska Soomaaliya
Gudaha dugsiga booliiska ee General Kahiye, haweenka boolsiika Soomaaliyeed waxay si maalinle ah uga helaan tababarro la mid ah kuwa ay helaan ragga booliiska. Waxaa la baraa tababarka aasaasiga ah ee booliiska heerar kala duwan iyadoo laga rajo qabo in la abuuro wax booliis oo sugan.
Wax ka yar labo sano ka hor ayaa waxaa la aasaasay qaybta dumarka booliska oo ka shaqaysa la tacaalidda xadgudubyada ka dhanka ah haweenka.
Waxayna noo sheegeen saraakiisha halkaa ka shaqeya in bishiiba in ka badan boqol dacwo oo la xiriira xadgudubyo loo geysto dumar ay soo gaaraan.
Dhame Idil Xasan waxay mas'uul ka tahay qaybtan u gaarka ah arimaha dumarka.
''Annaga waxaan xigsanaa mar walba qofka dhibanaha ah gaar ahaan marka uu dhibku ku dhaco qofka oo aan xitaa isbitaal gaynaa. Waan dawaynaa waxa uu u baahan yahayna waan siinaa', ayay tiri idil.
''Inta aan qofka la socono xaladiisa waxaan ku baraarujinaa inuu caddaalad helo oo uusan xaal iyo maslaxo qaadan'' ayay tiri idil oo ka mid ah duamrka wax koo bartay qurbaha.
Image caption Booliska waddooyinka sida Sucaado waxaa ilaaliyo ciidammo hubeysan maadama ay badan tahay khatarta ay wajahayaan
Balse caqabadaha haysta waxa ay tahay, in iyadoo ay kiisaka badan yihiin , haddana guulo badan kama aysan soo hoynin maxkamadeynta kuwa lagu tuhmo inay geysteen tacaddiyaadaasi.
Waxayna idili qabtaa inay u bahan yihiin taageero dhinaca tababarka iyo qalabkaba.
Shaqooyinka ay qabtaan booliska dumarka ah kuma eka oo kaliya dambi baaris, balse waxay sidoo kale ka shaqeeyaan wadooyinka oo waxay hagaan baabuurta iyo hubinta in loo hogaansamay shuruucda wadooyinka. Dumarkan waa kuwo bulshada aad uga dhexmuuqda. Inta ay howshan ku jiraanna waxaa ilaaliya ciidan hubaysan. Sababtoo ah wadooyinka wax walba aya ka dhici kara.
Saciida Maxammud oo ah sarkaal ka tirsan booliska waddooyinka ayaa waxaa laga dilay ninkeeda oo weerar ku dhintay. Iyadana waxaa soo gaaray dhaawac sideed sano ka hor.
Image caption Tababar ka socda Dugsiga booliiska ee General Kahiye oo ay dumarku qeyb ka yihiin
''Hoobiye ayaa igu dhacay ninkiina waa la iga dilay, anigana waan dhaawacmay. Waxaana diyaar u ahay inaan dalkan u dhinto una dhaawacmo, haddba dhaawac Ayaan ahay '' ayay tiri Saciida Maxamuud.
Qaar ka mid ah saraakiisha ragga ah ayaa dumarka kusoo biiray laamaha amaankana u arkaan mid aad muhiim ugu ah sugida amaanka iyo kasbashada kalsoonida shacabka dalka Soomaaliya.